डरलाग्दो भिडियोः कामको ओ, भरलोडले मलेसियामा नेपालीहरु कामकै क्रममा ढ, ल्दै, छ, टपटाउँदै – Dainik Sangalo
डरलाग्दो भिडियोः कामको ओ, भरलोडले मलेसियामा नेपालीहरु कामकै क्रममा ढ, ल्दै, छ, टपटाउँदै
November 23, 2020 585
काठमाडौं। क्षमताभन्दा बढी काम गराइएका कामदारहरु काम गर्दागर्दै त्यहीँ ढ, ल्छन् अनि भुइँमा बालुवामा राखिएको माछाजस्तै छ, टपटाउँछन् । यो डरलाग्दो भिडियोमा भुइँमा ढ, लेर छट्पटाउने कामदार या त नेपाली हुन् या त बंगलादेशी । मेडिकल सुरक्षाको सामान उत्पादन गर्ने मलेसियाका कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरु यसरी ढल्नुको कारण हो उनीहरुलाई जबरजस्ती क्षमताभन्दा बढी काम लगाइनु।
बेलायती अखबार मिररले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको यो भिडियो मलेसियामा त्यही कारखानामा काम गर्ने सहकर्मी कामदारले नै खिचेको बताएको छ । यी कामदार पञ्जा, पीपीइ जस्ता सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने कारखानामा काम गर्छन् । अहिले कोरोनाभाइरस महामारी अत्याधिक भएकोले यी सामग्रीको माग उच्च छ र मागअनुसारको आपूर्ति गर्दा यी कामदारलाई जबरजस्ती काममा लगाइएको छ । यी सामग्री बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिसले किन्छ ।
मिररको रिपोर्टअनुसार मलेसियाको टप ग्लोभ कारखानामा काम गर्ने ३० भन्दा धेरै कामदारलाई फोहर कोठामा कोचेर राखिन्छ । उनीहरुको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । मलेसियाको यो कम्पनीमा श्रमिकको अधिकारको उल्लंघन भएको कुरा उठेपछि अमेरिकाले यो कम्पनीका पञ्जामाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस अन्तर्गतका अस्पतालमा भने यिनै पञ्जाहरु आपूर्ति गरिन्छन् ।
टप ग्लोभका कम्तीमा १७ जना कामदार यो महिनाको सुरुवातमा कोरोनाभाइरस संक्रमित पाइएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका थिए तर अहिले उनीहरु संक्रमितको एउटा विशाल क्लस्टरको हिस्सा भएको विश्वास गरिन्छ जहाँ २ सयभन्दा बढी संक्रमित छन् । कम्पनीका कूल कामदारको एक चौथाइ अर्थात करिब ५ हजार ७ सय जना मेरुमा क्वारेन्टाइनमा छन् । यो ठाउँ क्वालालम्पुरबाट पश्चिममा रहेको औद्योगिक हब हो ।
कम्पनीका स्टाफहरु मुख्य गरी नेपाली र बंगलादेशी आप्रवासी हुन् । उनीहरुलाई कम्पनीले चलाएका होस्टेलमा राखिएको छ वा सस्ता होटलमा राखिएको छ । कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका बेला धेरै जनालाई कोचेर राखिएका होस्टेललाई मलेसिया र सिंगापुरमा भाइरस फैलिने मुख्य कारण मानिएको थियो । अहिले सार्वजनिक भएको भिडियो फुटेजमा कामदारहरु आफ्नो कारखानाको भुइँ वा होस्टेलको भुइँमा एक्कासी ढलिरहेका देखिन्छन् ।
Prevबागलुङको बडिगाडमा जीप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
Nextअशोक दर्जी धेरै पछी आफ्नो घर फर्किदा सबै छक्क परे उन्लाई देखेर
राजधानीमा कर्फ्यू नै लगाउने निर्णय ! कहिलेदेखि लागू हुने ?
बाँसबाट सुन्दर घरेलु सामग्री बनाउँदै झापाका युवा
दु:खद जब सडकमा मान्छेको मासु बेच्न थालियो ! भिडियो हेर्नहोस।